परम्परागत चाडपर्व र संस्कृतिको विकल्पको खोजी – eratokhabar
परम्परागत चाडपर्व र संस्कृतिको विकल्पको खोजी
ई-रातो खबर २०७५, २७ असोज शनिबार ०६:४२ October 13, 2018 769 Views
राजनीतिक आन्दोलनसँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलन
सांस्कृतिक रूपान्तरण समाजको सापेक्षतामा हुन्छ । यो विशाल पक्ष हो । यसका धेरै आयाम छन् । धर्म र संस्कृतिका कुरा अनन्त छन् । यो शास्त्र हो । यसले कतिकति क्षेत्र ओगट्ने हो, कहाँ जाने हो, सबैले ध्यान दिनुपर्छ नत्र यो हराउने क्षेत्र हो । यहाँ हिन्दु, बौद्ध, इसाईलगायत संस्कृतिका कुरा छन् । साम्राज्यवादी, सामन्तवादी साथै अहिले संशोधनवादी संस्कृति पनि आएको छ । द्वैधवादी संस्कृति पनि आएको छ । द्वैधवादी संस्कृति पनि खतरनाक छ । यसलाई पुँजीवादी संस्कृति भनिन्छ तर यो पनि सबैमा छ । रूपान्तरण हुनुपर्छ सबैले भन्ने तर रूपान्तरण पनि नहुने सांस्कृतिक द्वैधवाद हो । सङ्कटको बेलामा यो आउँछ । यो सङ्कटग्रस्त पुँजीवादको उपज हो ।
कम्युनिस्ट भनिनेहरूमा पनि सांस्कृतिक द्वैधवाद देखापरेको छ । यसका विरुद्ध हामीले सशक्त सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ । हामीले समाजलाई बुझ्ने मात्र होइन, बदल्ने पनि हो ।
त्यसकारण विकल्प के हो त, यो कुरा आएको छ । यसलाई बहसमा लैजानुपर्छ । विगतमा हामीले दसैँँतिहार मनाइयो । धर्म मानेर मात्रै दसैँँतिहार मनाइएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । १५ दिन बिदा दिन्छ । भेटघाट गर्नु छ । गाउँघरमा गएपछि सामाजिक कुरा हुन्छ । थुप्रैथुप्रै कुराहरू हुन्छन् । तिहार पनि मनाउने गरिएको छ । त्यो धर्म मानेर मात्र मनाइएको होइन । प्रमुख त राज्यसत्ता हो । सत्ताले पुरानो संस्कृतिको आडमा स्वार्थसिद्ध गर्ने काम गर्छ र पुरानो तरिकाले दसैँँ मनाउँछ । यही नयाँ सत्ता आउने हो भने सहिद दिवस मनाइन्छ । दसैँँ भनेको कुरूप पक्षमाथिको विजय हो । हामीले पनि देशका लागि बलिदान भएका सहिदको सम्झनामा मनाउने हो । १५ दिनको दसैँँको सट्टामा बरु ७ दिनको सहिद दिवस मनाउँला । कसरी हुन्छ, विकल्प दिन जरुरी हुन्छ ।
परम्परागत संस्कार/संस्कृतिको विकल्प यो हो भनेर हामीले हरेक क्षेत्रमा जानुपर्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा गर्दा मुख्य दुईवटा पक्ष छन् : कम्युनिस्टहरूकै रूपान्तरण हो, अरूको आशा राखेर हुँदैन । यो रूपान्तरण दुई किसिमको हुन्छ :
१ एउटा कम्युनिस्टहरूको रूपान्तरण ।
२. अर्को जनताको स्तरसम्मको रूपान्तरण ।
मलाई संस्कृतिमा बल प्रयोग हुनुपर्छजस्तो लाग्दैन । लेनिन र माओले ठाउँठाउँमा यो कुरा गर्नुभएको छ । लेनिनले धर्मबारे यान्त्रिक भौतिकवादी हुनु हुँदैन भन्नुभएको छ । परिस्थितिअनुसार कतै बल प्रयोग पनि गर्नुपर्छ तर आमरूपमा होइन । राजनीतिक आन्दोलनसँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलनलाई पनि व्यवस्थित बनाएर लग्नुपर्छ ।
संस्कार–संस्कृति समाजसापेक्ष हुन्छ
अनिल शर्मा ‘विरही’
परम्परागत संस्कार र संस्कृतिको वैज्ञानिक र व्यावहारिक विकल्प खोज्नुपर्छ । संस्कृतिको कुरा गर्दा चाहे सत्तारूढ होस्, चाहे पिछडिएको होस्, त्यो त्यसै आएको हुँदैन । संस्कृति तत्कालीन समाजको आवश्यकताअनुसार पैदा भएको हुन्छ । समाज विकासका क्रममा जुन वस्तुगत जीवनको विकास हुन्छ, त्यसले नयाँ संस्कृतिको माग गर्दछ । पछौटे चेतना भएका मान्छे पुरानै चेतनामा रहन चाहन्छन्, अग्रगामी विचार भएकाले नयाँ र वैज्ञानिक संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छन् । वस्तुगत आवश्यकताअनुसार नयाँ संस्कृति बनाउन चाहने र पुरानै चाहीराख्नेबीच टक्कर हुन जान्छ । पुरानो संस्कृति भत्काएर नयाँ निर्माण गर्न सुरु गर्दा दुई संस्कृतिबीच टक्कर भएके छ । त्यस्तो ठाउँमा नयाँ संस्कृति अभिव्यक्त भएको छ । यो जीवनवादी र वैज्ञानिक संस्कृति हो ।
यो आवश्यक छ र अनुकरणीय पनि छ ।
पुरानो संस्कृति मान्नेलाई घृणा मात्र गर्नु हुँदैन । हामीले आक्रामक बनेर मात्र हुँदैन । रूपचन्द्र बिस्ट ‘अवसर नपाएर इमानदार बनेका भातेहरू’ भन्थे । त्यस्तो गर्नु भएन । नसकेर सहिदिएको जस्तो पनि गर्नु भएन । आफ्नो विचारमाथि वा कार्यक्रममाथि हमला गर्लान् भनेर अर्को विचार र संस्कृति भएकालाई नबोलाउने होइन । मानौँ, अहिले पुरानो संस्कार र संस्कृति मान्नेहरू बलिया छन् रे । हामी पनि भोलि बलिया भयौँ भने हामीले पनि हमला गरे भयो नि त ! त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।
संस्कृतिमा अरूलाई आक्रामक तरिकाले हमला गरेर जाने तरिका हामीले सोच्नु हुँदैन । नयाँ संस्कृतिको कुरा गर्दा पुरानोको विकल्प दिनुपर्छ भन्नु सही हो । तर पुरानो संस्कृति पनि त्यसै बनेको होइन । अहिले जुन आचरण र व्यवहार छन्, ती एकाएक बनेका होइनन् । नयाँ संस्कृति पनि एकाएक बन्दैन र यो घोषणा गरेर मात्र हुने विषय पनि होइन । हामीले गर्दैगर्दै जाँदा यो बिस्तारै सूत्रबद्ध हुँदै जान्छ र निश्चित समयमा यसलाई लिपिबद्ध गर्न सकिन्छ । अहिले नै लेखिहाल्ने, पङ्क्तिबद्ध गराइहाल्ने र थालिहाल्ने कुरा सही हुन सक्दैन । तत्काल त्यसो गर्न लगियो भने प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संस्कारका रूपमा केही रूढिहरू पनि छन् । जस्तै : जनवादी बिहे भन्ने तर छोरीलाई दाइजो पनि नदिने र अंश पनि नदिने । छोरीलाई दाइजो दिनुपर्छ भनेर कयौँ मान्छेले कम्युनिस्टले गर्ने गरेको जस्तो प्रगतिशील बिहे गर्ने अनि दाइजो पनि नदिने, सम्पत्ति पनि नदिने गरेका छन् । त्यो ठीक होइन । प्रगतिशील विवाह भनेको त जनवादी राज्यसत्ताले माग गरेको प्रणाली हो । यसमा त पहिला केटा र केटीबीच प्रेम हुनुप¥यो । छोरीलाई अंश दिएको हुनुप¥यो । विचारमा समानता हुनुप¥यो । पण्डित बाजे र लमीको सट्टा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता लमी बन्छ । बिहे हुन्छ अनि जनवादी बिहे भनिहाल्ने ! यस्तो हुँदैन । यस्ता थुपै्र रूढिहरू छन् । यस विषयमा अलि लामो छलफल चलाउनुपर्छ ।
जनवादी बिहेको कुरा गर्दा पनि कम्युनिस्टको जीवन त मलामीको यात्रा होइन होला नि ! त्यसकारण बिहे त रमाइलो हुनुप¥यो नि ! प्रगतिशील बिहे पनि रमाइलो हुनुप¥यो । नाच्नुप¥यो । सम्भव छ भने मीठो खानु पनि प¥यो । बाजासाजा हुनुप¥यो । भैँसीले त म्युजिक बजाएपछि बढी दूध दिन्छ भन्ने अनुसन्धान भइरहेको समयमा हामीकोमा एउटा बाजा पनि हुनु नपर्ने । खगेन्द्र सङ्ग्रौलालाई प्रमुख अतिथि राखेर प्रगतिशील बिहे गर्ने अनि घर लगेर सिन्दुर लगाइदिने, यस्तो पनि भइरहेको छ प्रगतिशील भन्ने बिहेप्रणालीमा । यस्तो हुनु हुँदैन । बिहे भन्ने चीज थोरै त रमाइलो पनि हुनुपर्छ ।
उता शोक कार्यक्रमहरू पनि शोक जनाउने किसिमका हुनुप¥यो । मान्छे मर्दा थुप्रै मान्छे रुनुप¥यो । हो, श्रद्धाञ्जली भनेपछि शोकमग्न वातावरण हुनुप¥यो । जस्तै, रातो वा रङ्गीचङ्गी भनेको रमाइलो हो भने सेतो लगाएर कपाल फिँजाएर बस्दा नरमाइलो हुने भयो । किरिया बस्ने चलन त्यसरी पो आएको हो कि ! के हो त शोक मनाउने भनेको ? हामी हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्झेर शोक मनाउँछौँ । पछि वर्गसङ्घर्षका क्रममा शासकहरूले आफ्नो अनुकूलमा गरुडपुराणसम्म ल्याइदिए । शोक मनाउन हामीले नयाँ चलन चलाउनुप¥यो ।
जनयुद्धकै क्रममा हामी पनि सहादत प्राप्त गर्ने कमरेडहरूलाई सलाम गरेर हिँड्थ्यौँ । कतिपयलाई झन्डासम्म ओढाउँथ्यौँ । सम्भव भएसम्म ठूलाठूला सभाहरू राखेर विशिष्ट ढङ्गले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गथ्र्यौं । त्यसकारण तत्कालीन अवस्थामा जे गर्दाखेरि वातावरण शोकमग्न हुन्छ, त्यही गर्ने हो ।
संस्कार र संस्कृति परिस्थितिसापेक्ष हुन्छ । साझा जीवनले साझा संस्कृति पैदा हुने हो । समग्रमा अन्धविश्वासी–रूढिवादी परम्परा र अवैज्ञानिकताका विरुद्ध वैज्ञानिकताका पक्षमा बहस आरम्भ हुनु राम्रो हो । यसलाई अभियानका रूपमा लैजानुपर्छ ।
पहिला कम्युनिस्टहरू नै रूपान्तरित हुनुपर्छ
२००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । पार्टी स्थापना भएको आज धेरै वर्ष बितिसकेका छन् । हामीले निरन्तर सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा उठाउँदै आएका छौँ । तर यतिलामो समय बितिसक्दा हामी कहाँनेर छौँ भन्ने कुरा मननीय छ । नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण सफल हुँदा नै समाजको रूपान्तरणको काम गर्न सक्छौँ । हामीले नेपालमा सामन्तवादी संस्कृति र त्यसको मात्रै रूपान्तरणको कुरा गरेर यो आन्दोलनलाई ठीक ठाउँमा पु¥याउन सक्दैनौँ । सामन्तवादी–पुँजीवादी संस्कृति, त्यसले नेपालमा पारेको प्रभाव र त्यसको गठजोडबारे पनि व्यापक छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । संस्कार र संस्कृतिको रूपान्तरणको कुरा गर्दा हिन्दु धर्मसंस्कृतिमाथि बढी आफूलाई केन्द्रित गर्ने गरेका छौँ । यसैले जकडेकाले यसमा केन्द्रित हुनु ठीकै हो तर यसका साथै समग्र नेपाली संस्कृतिमाथि नै हामी केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
समस्या हिन्दु धर्म र त्यसबाट डोमिनेट भएको संस्कृतिमा मात्र छैन । हामीकहाँ आदिमकालीन प्रकृतिपूजक संस्कृति पनि छ । त्यसका पनि समस्या छन् । संस्कृतिका विभिन्न रूप पनि छन् । जब हामीले समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरण तथा वैज्ञानिक र सरल संस्कृतिको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यस बेलामा हामीले नेपालको समग्र संस्कृतिको तस्बिर के हो ? त्यसको पनि मसिनो व्याख्या गर्नुपर्छ र आफ्नो प्रहारको निशाना के हो ? त्यसअनुसारको योजना बनाएर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संस्कृति र संस्कार रूपान्तरणको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा रहन्छन् ः एउटा, यो क्रमिक रूपमा, बिस्तारै रूपान्तरण हुँदै जान्छ । अर्को, यसको रूपान्तरणका लागि हामीले सचेतन प्रयत्न गर्नुपर्छ जसको माध्यमबाट हामी यसको रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र आफ्नो उद्देश्यअनुसार हामी यसलाई लिएर जान्छौँ । यहाँ हामीले गर्न खोजेको कुरा हस्तक्षेपकै हो । हो भने हामीले अगाडि सार्नुपर्ने विकल्पहरू केके होलान् । रूपान्तरणको कुरा गरेर मात्रै पनि हुँदैन । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र यससँगै निरन्तर चलिरहेको सांस्कृतिक धरातल र यसको परिणतिलाई अगाडि राखेर हेर्दा कुरा गरेर मात्र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुँदैन । हामीले पक्कै पनि त्यसका विरुद्ध ठोस विकल्प लिएर मात्र अगाडि जानुपर्छ । संस्कृतिको विधि बनाएर एकाएक लागू गर्न पनि सकिन्न । सांस्कृतिक रूपान्तरणको जटिलतालाई बुझेर मात्र हस्तक्षेप गर्नुपर्छ किनकि यो धेरै जटिल समस्यासँग जकडिएको छ । आत्मिक पक्ष जोडिएका कयौँ पक्षहरू छन्, तिनलाई हस्तक्षेप होइन, रूपान्तरणको दिशामा गएर परिवर्तन गर्न सक्छौँ । अलिकति छलफल र विमर्शको माध्यमबाट हामीले जन्म, मृत्यु र बिहे संस्कारलाई बदल्न सक्छौँ । मानवजीवनका यी तीनवटा महत्वपूर्ण घटना छन् । यसलाई प्रगतिशील विधिमा बाँधेर अगाडि लैजाने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? यो समस्या सबै कम्युनिस्ट पार्टीमा व्याप्त छ । कतै बढी छ, कतै कम छ । एउटा कम्युनिस्ट पार्टी सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा सही ठाउँमा उभिए पनि सर्वहारावादी सांस्कृतिक मान्यता पनि सही ठाउँमा उभिएको हुन्छ भन्न सकिन्न । सिद्धान्त ठीक भएर मात्र हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन सही रूपमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । त्यसैले यो प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । माओले जो निरन्तर सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको छ, यसमा त्यो गम्भीर रूपले जोडिएको छ । संसार बदल्न हिँडेको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नायकहरूले त्यस्तो विशिष्ट गुण आर्जन गर्नुपर्छ । त्यस्तो गुण भएको नेतृत्वको अभाव छ । जसको अनुहार हेरेर रातमा निदाउन सकिन्छ । सुख र दुःखको बेलामा भरोसा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण कम्युनिस्ट आन्दोलनको सांस्कृतिक रूपान्तरण आजको ज्यादै महत्वपूर्ण एजेन्डा हो ।
सबै संस्कृतिका राम्रा कुरा ग्रहण गरौँ
संस्कृतिको क्षेत्र फराकिलो छ । प्रायः बहस हिन्दुधर्मप्रति लक्षित भएर हुने गरेको छ । नेपालमा १२३ जाति छन् भनिएको छ । ती सबैका आआफ्ना संस्कृति छन् । राज्यमा प्रभुत्ववादी संस्कृति छ, जहाँ विभिन्न जातजातिका संस्कार र मान्यता छन् । ती प्रभावशाली पनि छन् । अर्को, जनजातिका संस्कार छन् । कसको छोरा, कसकी छोरी भनेर परिचित गराउन पनि ज्यादै जरुरी भएको छ । बिहे संस्कार त धेरै गज्याङमज्याङ नै भएको छ । यसको चर्चा हुनै छोड्यो । अन्तरजातीय बिहे हुन थालिसक्यो । प्रेमविवाहमा रूपान्तरण भइसक्यो ।
हिन्दु संस्कारको सबभन्दा खतरनाक कुरा चूडाकर्म हो । व्रतबन्ध भएपछि यसले सानो भनिएको जातिको घरमा टेक्नै नहुने बनाउँछ । मृत्यु संस्कार पनि डरलाग्दो छ । एकातिर हाम्रो आफन्तको वियोग भएको हुन्छ । पीडा हुन्छ । त्यसैमा झन् कपाल काट्ने, १३ दिनसम्म कष्ट सहेर नाङ्गैमुडुलै बस्नुपर्ने, खाना पनि नराम्रो । यस्तो वातावरण र खानपानले मानिस रोगी हुनसक्छ । यस्तो चलनले हामीलाई झन् पीडित बनाएको छ ।
मान्छेको मृत्युमा सबै शोकमग्न हुन्छन् । संसारका सबै जातिले आआफ्नै तरिकाले शोक मनाउँछन् । हामी आफ्नै तरिकाले मनाउँछौँ । हाम्रो तरिका धेरै रूढिवादी भयो । हिन्दु संस्कार पूरै राम्रो पनि छैन, पूरै नास गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि छैन । कतिपय कुरा नास नगरिनहुने पनि छन् । मृत्यु संस्कार १२ वर्षबाट १२ महिना हुँदै १२ दिनमा घट्यो । अब १२ दिनबाट १२ घन्टातिर घटाउनेबारे छलफल गर्नुपर्छ ।
हिन्दु गुरुहरू यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ । मरेका व्यक्तिका नाममा भएभरको तामझाम गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको पनि पण्डितहरू नै भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले त उहाँहरूकै शास्त्रअनुसार पनि यत्रो तामझाम नगरे हुन्छ भन्नुहुन्छ । गर्ने कर्ताको जिम्मामा छाड्नुपर्छ भनेर शास्त्रअनुसार नै भन्नुहुन्छ । राष्ट्रसेवक, समाजसेवक, चिन्तक, दर्शनिक, लेखक, कवि, संन्यासी आदिले किरिया गर्नु पर्दैन भनेर छूट दिएको छ हिन्दुधर्ममा । अशोकजी पनि यहीभित्र पर्नुहुन्छ । तर उहाँका आफन्तले आमाको किरिया गर्नैपर्ने बाध्यता किन थोपर्ने ? कसैको इच्छाप्रति धावा बोल्न कसैलाई छूट छैन । हामी पनि कसैको आस्थामाथि धावा बोल्दैनौँ । हाम्रो आस्थामाथि पनि कसैले धावा नबोलून् । हामी राम्रो भएर अरूलाई देखाउनुपर्छ ।
संस्कृतिबारे व्यापक छलफल गरौँ । यो व्यापक छ । सबैजसोको आआफ्नै संस्कार/संस्कृति छ । किन हिन्दुको मात्रै गर्ने, अरूका बारेमा पनि छलफल गरौँ न ! चिन्तकहरूले संस्कृतिभित्र आत्मिक र भौतिक पक्ष हुन्छ भनेकै छन् । त्यो हिन्दु संस्कारमा मात्र भनेको होइन । जनजातिको संस्कारमा पनि हो । भौतिक संस्कृति, घर, कलम, कापी आदि हो भने यो निर्माण गर्ने चिन्तनचाहिँ आत्मगत संस्कृति हो । संस्कार परम्परागत हुन्छ । जोडिँदै आएको हुन्छ । त्यसमा विज्ञानको हात हुँदैन । मान्यता र आस्थामा जोडिएर आएको हुन्छ । यसकारण संस्कारमा बिस्तारै परिवर्तन गर्नैपर्छ । एउटा अमेरिकीले नेपालमा आएर धोती फेरेर भात खान सक्छ तर हामीलाईजस्तो उसलाई सुहाउँदैन । त्यसले हाम्रो नक्कल मात्र गर्न सक्छ । त्यसकारण संस्कार फेर्न आक्रमण होइन, सिकाउनुपर्छ ।
नेपालको प्रभुत्वशाली संस्कृतिले जनजातिको संस्कृतिलाई माथि उठ्न दिएको छैन । हायूजातिको पनि हाम्रै दसैँँजस्तै चाड हुन्छ । उनीहरूको ९ दिन लामो हुन्छ । हामीले मूर्ति पूजा गरिरहेका छौँ । हायूको मन्दिरमा छत छैन । मूर्ति नहुनु धेरै प्राचीनताको चिन्ह हो । हायूहरू आर्य र अनार्य दुवैका साथी हुन् । हायूहरू प्रकृतिपूजक हुन् । खसको कुनै संस्कृति थिएन । पछि आएर सिकेका हुन् । यी घुमन्ते जाति हुन् ।
पहिला जाति, वर्ग केही थिएन । वर्णाश्रम थिएन । सिन्धुघाँटीको सभ्यतासम्म आएपछि किराँत र द्रविडसँग घुलमिल हुँदा उनीहरूले संस्कृति निर्माण गरेर आए । अंगीरा ऋषिको पालादेखि नै यिनीहरू खसको रक्तमिश्रण भएर आए । खसहरू हूलका हूल अतिक्रमण गर्दै आएका हुन् । यतै आएर जुन जातिलाई जिते, त्यही जातिलाई बिहे गरे । अंगीरा ऋषिले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने– अब हाम्रो आर्य जाति त ध्वस्त हुने भयो । हाम्रा ठूलाठूला वीरहरू त नारीहरूसित लठारिएर पो हिँड्न थाले । मोजका लागि ठूलाठूला दरबारभित्र पो पस्न थाले । उनले ईशापूर्व १८०० मा यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उतिबेलादेखि बिग्रेको खस जाति अहिलेसम्म बिग्रँदै आएको छ । समाजमा अनावश्यक विवाद खडा गरेका छन् । त्यसकारण हामीले समग्र संस्कृतिको अध्ययन गरौँ र तिनको राम्रा पक्षको मात्रै अनुशरण गरौँ ।
हामीले कल्पना गरेको समाजवादी व्यवस्थामा सबैका संस्कारका राम्रा पक्षको रक्षा हुन्छ । सबैले सबैको आस्था र मान्यतालाई स्वीकार गर्ने संस्कार बसाल्नु प्रगतिशील संस्कार हुनसक्छ । लिङ्गे पिङ सबै जातिकाले खेलौँ । पितृ र मातृलाई सम्मान गरौँ । फोटो राखौँ । बा–आमाको सालिक स्थापना गरौँ । यस्तो कुरामा कुन जाति नआउने हुन्छ ? आफ्ना सङ्घर्षशील पुर्खाको योगदानको सबैले संरक्षण गरौँ, स्मरण गरौँ । सबैले यसो गर्दा कसको, कहाँनेर जातित्व गुम्छ र ! सबैसित हातेमालो गर्ने संस्कृति निर्माण गर्नु हाम्रो ध्येय हो । दमाईलाई भित्र पस्न दिएनौँ र हायूसित सँगै बसेर भात खान सकेनौँ भने हामी विकासको बाटोमा अगाडि जान सक्दैनौँ ।
अन्त्यमा, अशोकजीले परम्परागत किरियाकर्म नगरेर जुन नयाँ संस्कृति निर्माणका लागि प्रयास गर्नुभएको छ, यो उदाहरणीय छ । सबैले यो कुराको अनुकरण गर्नुपर्छ । यसरी बहस र छलफल गर्दै जाने हो भने नयाँ र वैकल्पिक संस्कृति निर्माण हुन समय लाग्दैन ।
आन्दोलनबाटै संस्कार र संस्कृति बदलिन्छ
हिन्दु दर्शन पूर्वीय दर्शन हो । गङ्गा नदीको मैदानमा चार वेद १८ पुराणको विकास भयो । त्यसमध्ये कान्छो गरुडपुराण हो । संस्कृति र संस्कारमा आएका नयाँ विधि र विधानले प्रगतिशील भूमिका खेल्छन् । आर्यहरू जब सिन्धु उपत्यकाबाट तल्लो बाटो लागेर गङ्गा नदीको किनारमा बसेपछि आर्य सभ्यताको विकास भयो ।
वैदिक सभ्यताको विकास कसरी भयो भने अन्नको बीउ फालेपछि सिन्धुको मैदानमा थुप्रै अन्न उब्जनी भइहाल्थ्यो । सबभन्दा पहिला कृषियुग आयो । त्यसपछि पशुपालनको युग आयो । एसियाको विशेषता यस्तो रह्यो । यहाँ पशुपालनको युग आउँदा युरोपेलीहरू जङ्गलमा हिँड्थे । आजभन्दा पहिला पाँच सय वर्षको इतिहास हेर्दा यहाँ कृषि र पशुपालनको युग आयो । एसियाको विशेषता यस्तो रह्यो । यहाँ पशुपालनको युग आउँदा युरोपेलीहरू जङ्गलमै थिए । ५००–७०० वर्षसम्म युरोपको त्यो हालत थियो ।
रूढिग्रस्त कुरा हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा मात्रै छैन । पश्चिमा दर्शन हे¥यौँ भने पुनर्जागरण कालभन्दा अगाडि मध्ययुगमा स्वर्ग जाने टिकट बिक्री हुन्थ्यो । पापमोचनपत्र बिक्री हुन्थ्यो । मार्टिन लुथर किङजस्ता मान्छेले त्यसको विरोध गरे । मार्टिन लुथरको सङ्घर्षपछि युरोपमा एउटा लहर आयो । पुरातनवादी संस्कृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरीकन परिवर्तन नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा युरोपको इतिहासबाट थाहा पाउन सकिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा त्यसरी पुनर्जागरणको युग आएन । हामी ह्वाङ होलगायतको सभ्यता पढ्छौँ । त्यसलाई अवशेषका रूपमा मात्र हेर्छौं । गङ्गा नदीको मैदानमा हुर्किएको आर्यको वैदिक सभ्यता निरन्तर बगिरहेको छ । यसमा केही वैज्ञानिक कुराहरू पनि छन् ।
केही धार्मिक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि यसलाई विकृत बनाउँदै लगे । त्यही दर्शनका कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाका रूपमा हेर्ने चलन चल्यो । तर पूर्वीय दर्शनको पूरै अस्वीकार गर्ने भन्दा पनि त्यसका खराबीलाई हटाउने कुरा मुख्य हो । त्यसभित्र पनि विज्ञानसम्मत मन्यता छन् । यसको अध्ययन भइरहेको छ । जस्तो : वरपीपल । यसले मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यावश्यक अक्सिजन कति फ्याँक्छ, यसको अध्ययन भइरहेको छ । यो वैज्ञानिक कुरा हो ।
संस्कृति सरल होइन, बक्ररेखाबाट हिँड्छ । युनानको दर्शन विश्वव्यापी दर्शन थियो । त्यही दर्शनबाट अब हजारौँ दर्शन निर्माण भइरहेको छ । गरुडपुराणले त्यतिबेला प्रगतिशील महत्व राख्थ्यो । त्यतिबेलाका महिला र युवाहरूमा प¥यो– गङ्गा नदीको मैदानमा अनाज फल्थ्यो, उत्पादन हुन्थ्यो । त्यतिबेला सेना, पुलिस, राज्यबिनाको समाज थियो । त्यस्तो अवस्थामा समाजलाई कसरी चलाउने र नियन्त्रण गर्ने भन्ने हुँदा गरुडलगायत ऋषिहरूले चिन्तन गरे र नियम बनाए– यो पाप गरे यो फल पाइन्छ । नराम्रो काम गरे नराम्रो फल पाइन्छ भनेर विधानजस्तो बनाए । तर आज त्यो पुराण पुरातन भयो । समाज नयाँ ठाउँमा आइसक्यो । त्यो पुराणलाई आज शासकवर्गले शोषण गर्ने र शासन गर्ने साधन बनाए । त्यसैले अहिले हामी त्यो गरुडपुराणलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।
२०६६ सालमा मेरो बुबा बित्नुभयो । मैले पनि किरिया गरिनँ । यहाँँ पनि त्यस्तै भयो । यस बेला अशोकजीकी आमा बित्नुभयो । अशोकजीले किरिया गर्नुभएन । एकखाले पुरातनपन्थी समाजले उहाँले गरेको विद्रोह स्वीकारेन । त्यो पुरातनलाई बदल्न नचाहने चिन्तन हो । वैदिक परम्पराअनुसार पनि एक भाइले मात्र किरिया गरे पुग्छ । गरुडपुराणका लेखक र पाठक ठूलठूला विद्वान्हरूले किरिया नगरे पनि हुन्छ भनेका छन् भन्ने सुनिएको छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट इतिहासमा रामेछाप जिल्लाको पनि विशेष भूमिका छ । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल जन्माएको जिल्ला हो यो । म प्युठानमा जन्मेको हुँ । प्युठान पनि एउटा ऐतिहासिक जिल्ला नै हो । म प्युठानबाट पछि दाङ बसाइँ सरेँ । मेरा बुबा प्युठानमै हुनुहुन्थ्यो । २०४१ सालमा नै त्यहाँ सहभोज कार्यक्रम चल्यो । त्यतिबेलादेखि नै कम्युनिस्टको प्रभाव परेकाले बाबाको किरिया नगर्दा मलाई त्यति असहज भएन । पहिला केही समयसम्म त दाजुभाइले शव नै उठाउनुभएन । उहाँहरूले कपालसम्म फाल्न आग्रह गर्नुभयो तर मैले मेरो विचार, दर्शन र सिद्धान्तले दिँदैन भनेँ, उहाँहरूले भनेजस्तो गरिनँ । विकल्प के दिने त भन्दा फोटो राखेँ र साँझबिहान माल्र्यापण गरेँ । १३ औँ दिनको दिन कार्यक्रम गरियो । काङ्ग्रेसका मान्छेले समेत राम्रो हो भने ।
मेरो बुझाइ के छ भने संस्कृति भनेको जडमा रहेर छलफल गर्ने विषय होइन । हामीले त पण्डितलाई पनि आसनग्रहण गराएका थियौँ । तिनीहरूले पनि यो ठीक छ बाबु भनेका थिए । बेठीक भयो भन्ने त एकजना पनि निस्किएन । कार्यक्रम भयो । वक्ताहरूले भाषण गरे । सकारात्मक सन्देश गयो ।
नयाँ संस्कार त खासगरी नयाँ पुस्ताले प्रयोग गर्छ । पुरानो संस्कृति छोड्दै जाँदा नयाँ निर्माण हुँदै जान्छ । संस्कार कर्मकाण्डीय हुँदैन । बुद्धले भगवान् छैन, छ भने पूर्वमा छ भनेका थिए । उनलाई अहिले भगवान् मानिएको छ । तिनकै नाममा ठूलठूला मन्दिर, गुम्बा र चैत्य बनेका छन् ।
वामपन्थी आन्दोलन कमजोर भयो भने माक्र्स र एङ्गेल्सहरूलाई पनि पूजा गर्नेतिर जान्छ । यो खतराबाट बचाउनुपर्छ । अहिले उत्तरकोरियामा किम इल सुङलाई पूजा गरिन्छ । बन हरियाली भएको पनि सुङकै कारण मानिन्छ । अहिले चीनमा माओको लाइन छोडियो । चीन उपभोक्तावादी संस्कृतितिर गयो । प्रतिक्रान्ति भयो । नयाँ पुँजीवादको अभ्यास भएको छ । त्यहाँ माओलाई ईश्वरका रूपमा मानिन्छ तर नीति मानिन्न । हामी पनि त्यो दिशातिर जाने खतरा रहन्छ । हाम्रा संस्कार र संस्कृतिलाई हामीले बदल्नु जरुरी छ ।
हिन्दु संस्कारमा पहिला सतीप्रथा थियो । प्रताप मल्लका मात्रै ३३ वटी रानी सती गएका थिए । भारतको इतिहास हेर्दा महिलाहरूलाई पति मर्दा सती जान्नँ भन्ने पत्नीलाई लखेटीलखेटी आगोमा हालेर मारिन्थ्यो । पर्खाल नाघ्दै भागेर अङ्ग्रेजको घरमा गएर ज्यान जोगाएको इतिहास छ । हाम्रो हिन्दु दर्शनमा नरबलिको परम्परा थियो । यो पूर्वीय दर्शनमा भएको कुरा हो । हामीले यो छोड्न जरुरी छ ।
अहिले पहिचानको कुरा आएको छ । यस विषयमा मेरो फरक मत छ । १९९० मा सोभियत युनियनको विघटनपछि जातीय पहिचानको नारा युरोपियनहरूले लिएका हुन् । जातीय मुद्दा वर्गसङ्घर्षलाई तुहाउन ल्याइएको हो । एसियालाई विभाजित गर्न ल्याइएको हो । यो आधुनिक नश्लवादी चिन्तन हो । भारतको एउटा कार्यक्रममा हामी गएका थियौँ । त्यहाँ जातीय पहिचानका बारेमा धेरै छलफल भयो । नेपालबाट माओवादी, एमाले र हामी थियौँ । जातीय नारा हाम्रो नारा होइन भन्नेमा हामी पुगेका थियौँ । वर्गसङ्घर्षलाई धुमिल पार्न आएको नारा हो भन्ने थियो । पहिचानको राजनीति त बिगार्न आएको हो भन्ने शङ्का गरियो । यो उत्तरआधुनिकवादी संस्कृति हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
संस्कार/संस्कृतिलाई नउठाउने भन्ने होइन । हाम्रा विभिन्न भाषाभाषी र धर्मसंस्कृति छन् । यो नेपालीको सम्पत्ति हो । यसलाई वैज्ञानिक बनाएर जानुपर्छ । परिमार्जित गरी नयाँ बनाउनुपर्छ । नबदलिने भए सतीप्रथा रहिरहन्थ्यो । किरिया गर्ने समय १३ वर्षबाट १३ दिनमा झ¥यो ।
प्युठानमा अङ्ग्रेजी पढ्न खोज्दा मोहनविक्रमले गाई खाने विद्या लियो भन्थे रे । २०३८ सालमा म र एकजना मगरले सँगै भात खाँदा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्थे । आज समाज यहाँ आयो । समाज बदलिँदै जान्छ तर यसलाई गुणात्मक रूप दिनुपर्छ । हामीजस्ता अभियन्ताको आवश्यकता पर्छ । यताबाट अशोकजीले यसको अगुवाइ गर्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो छ । हामी बदलिँदै जाँदा नयाँ संस्कृति पनि निर्माण हुँदै जान्छ । माक्र्सवादी ढङ्गले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ । तर संस्कृति निर्माणका लागि हामी पाखण्डी हुनु हँुदैन । सम्झाउँदैबुझाउँदै जानुपर्छ । यसैगरी बौद्धिक बहस जारी राख्नुपर्छ । संस्कार र संस्कृति अवश्य बदलिन्छ । अशोक सुवेदीजीको पहलमा हितप्रसाद उपाध्याय जूनमाया सुवेदी साहित्य प्रतिष्ठानले यसरी रामेछापसम्म ल्याएर सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सचेततापूवर्क बहस आरम्भ गराएको छ, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण, सराहनीय र अनुकरणीय काम हो ।
जनमुखी संस्कार निर्माण गरौँ
प्रा. डा. रामप्रसाद दाहाल
जङ्गे पिलरलाई फालेजस्तै पुराना संस्कार र संस्कृति एकैचोटि फाल्न सकिन्न । भूगोलभित्रको जङ्गे पिलरजस्तो संस्कृति होइन । तर राष्ट्रिय चिन्तनभित्रका पृष्ठभूमिहरू बडो महत्वपूर्ण हुन्छन् । त्यो पृष्ठभूमिबाट संस्कृतिलाई हेरिनुपर्छ । हामीले जनमुखी र वैज्ञानिक संस्कृति आफैँले निर्माण गर्नैपर्छ । यसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण र उद्योगलाई यसमा जोड्नुपर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति हुनुपर्छ । यसको हामीले नै विकास गर्नुपर्छ । श्रमलाई प्रगतिशील राष्ट्रवादमा ढाल्नुपर्छ ।
हामीले हिन्दु संस्कृतिलगायत अन्यको पनि हेर्दा यहाँ जस्केलो संस्कृति रहेको देखिन्छ । अगाडिबाट जान गाह्रो भएपछि जस्केलोबाट गएर छोरीबुहारीले भित्रको काम गर्छन् नि, त्यस्तै बाहिरबाहिर नयाँ संस्कृति मानेजस्तो गर्ने तर भित्रभित्रै पुरानै संस्कृति बोकिराख्ने । यस्तो जस्केलो संस्कृति छ । त्यसलाई तोड्नुपर्छ । समय लाग्ला तर यो तोडिन्छ ।
यहाँ लिने संस्कृति आएको छ । अहिले मान्छे मर्दा १३ दिन किरिया बस्ने चलन छ । अझै यस्ता खालका कुसंस्कार हामीभित्र छन् । त्यस्ता कुरा समाप्त पार्न सबैले यसको सुरुआत गरौँ । जस्केलो संस्कृति बन्द गर्नेतिर लागौँ । श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृति नै ल्याउनुपर्छ । सोच्ने तरिकालाई बुँदागत रूपले पहिल्याएर अगाडि बढाऔँ । तीज टुँडिखेलमा मनाउन थालिसके । यो डेढ महिना हुँदै डेढ वर्षसम्म मनाउनुपर्छ भन्न थालिसके । यो प्रवृत्ति घटाउनुपर्छ । लिने संस्कृतिभन्दा दिने संस्कृति उजागर गर्न सकौँ ।
नारायण शर्मा ‘कमलप्रसाद’
राजनीतिक आन्दोलनसँगसँगै सांस्कृतिक आन्दोलन हुनुपर्छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । सचेत रूपमा विकल्प प्रस्तुत गरी प्रयोगसमेत गर्दै गर्नुपर्छ । रूपान्तरण सांस्कृतिक रूपले समेत हुनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने तर नहुने र पुरानै गर्ने द्वैधवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ तर यत्तिले पनि पुग्दैन । कम्युनिस्ट नेता, स्वयम् कम्युनिस्ट पार्टी पूरै र समर्थक–शुभचिन्तकसम्म पनि रूपान्तरण भएर अर्थात् नयाँ संस्कृति अवलम्बन गरेर उदाहरण र नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यसलाई विस्तार र विकास गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाई लागू गर्नुपर्छ । रूपान्तरण क्रमशः र स्वतः पनि हुन्छ केही । केही छलाङमा, योजनामा र बलप्रयोगमा हुन्छ । क्रमशः र स्वतः हुनेमा मात्र विश्वास गर्नु स्वतस्फूर्ततावाद हो र क्रमशः मात्रै हुन्छ भनेर चूपचाप बस्नु सुधारवाद हो । धार्मिक दृष्टिले मात्र दसैँँ–तिहारजस्ता चाड मनाइएका होइनन् ।
सामाजिक पक्ष, संवेदनात्मक पक्ष, मनोरञ्जनको पक्ष र उत्सव पनि यिनमा सन्निहित भएको कुरा सही छ । दसैँँ कुरूप पक्षमाथिको विजय त हो तर यसको विकल्प सहिद सप्ताह भने अलि नहोला कि ? जनयुद्ध दिवस, गणतन्त्र दिवसजस्ता उत्साह र उमङ्गमय दिवस पो विजय दिवस हुनसक्छ । सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि शिक्षा, सञ्चार र संस्कृतिजस्ता तीन क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउनुपर्दछ तर राजनीति र अर्थनीतिमा हस्तक्षेप भएन भने पनि त्यो कमजोर हुन्छ । तसर्थ दुवैलाई सँगसँगै लैजानु उपयुक्त र अनिवार्य हुन्छ ।
क्रान्तिकारी संस्कृति राष्ट्रवादी, जनवादी, प्रगतिवादी, वैज्ञानिक, सरल र सरस हुन्छ र हुनुपर्छ र यस्तो नीति निर्णय गरेर नै तय गर्नुपर्छ, जो हामी क्रान्तिकारी भन्ने कम्युनिस्टहरूकै प्रमुख कार्यभार हो । अन्यत्र बाहिरबाट यसप्रकारको वैल्पिक संस्कृतिको अपेक्षा गर्नु गलत र मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।
हामीले नयाँ संस्कृति निर्माण र अवलम्बन गर्ने हो र नयाँ गर्ने नाममा समाजबाट अलग त हुनु हुँदैन तथापि अलग हुनु हुन्न भन्ने नाममा समाजले नबुझ्दासम्म अवलम्बन नगर्ने हुनाले हामीले पनि नयाँ अवलम्बन नगर्ने गर्नु हुँदैन । हामीले नयाँको वैज्ञानिकता, सामाजिकता बुझेर अवलम्बन गर्न छोड्नु हुँदैन ।
कुनै संस्कार–संस्कृति रूपमा फरक भए पनि सारमा फरक नहुनेप्रति सजग हुनुपर्छ । राजा मान्ने संस्कृति त्याग गरे पनि राजाजस्तै शक्तिशाली नेता, प्रशासक, पैसावाल वा सत्तावाललाई मान्ने संस्कार–संस्कृतिको विकास हुने–गर्ने गर्नु हुँदैन, तिनको रूप फरक भए पनि सार एउटै हो । (केही समयअघि काठमाडौँमा नयाँ संस्कारको खोजी गर्दै आयोजना गरिएको गोष्ठीमा व्यक्त विचारको सार ‘परम्परागत संस्कार–संस्कृतिको विकल्पको खोजी’ पुस्तकबाट लिइएको हो– सं.)
२०७५ असोज २७ गते शनिबार प्रकाशित
पार्टी कार्यालय र दास क्यापिटल
सिन्धुलीको मुल्कोटमा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यू हुनेको संख्या ३ पुग्यो
अखिल (क्रान्तिकारी)ले भन्यो – विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना भयो